Labo abafisa ukuzama ngokuvamile ukuncishiselwa emfushane ukungakwazi ukumisa linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso isitayela kanye izitayela ezahlukene, kodwa akuyona. Yiqiniso, ubude ukulinganiselwa ezithile, kodwa ngesikhathi esifanayo wavula eziningana izici ezintsha kanye nemifanekiso. Nge kusihlwa nezinketho iholidi konke kucacile: zokubhekana nazo esandleni master abanolwazi. Futhi yini okufanele uyenze nge isitayela abayitoho ukubheka elikhanyayo, stylish, yasekuqaleni futhi ngesikhathi esifanayo ukwazi babo futhi Ngemizuzwana? zezinwele short kwabesifazane - .. Ingabe bob, page Pixie, Bob Sasson, isigaba, ezitebhisini, njll Bonke abe inguqulo eyisisekelo isitayela, kanye nenombolo yabanye ngesisekelo ezihlukahlukene ukwakheka. zezinwele Everyday ukuba nezinwele ezimfishane futhi kulula ukwenza ngosizo izikhonkwane nezinye izinsimbi, ezifana tourniquets, ezisonga, amabhandishi nokunye. Cabanga ngokoqobo futhi stylish sikunguqulo efanayo nsuku zonke.
kwekhanda Okuvamile ngoba ezisontekile
Lapho kukhona ukuchitha umzuzu nje owodwa esingeziwe isitayela ngokucophelela futhi onzima, futhi ngesikhathi esifanayo une abacaphuni nobe aminyene izinwele imicu emva wave, silalela le ndlela elula ezingokoqobo ukusetshenziswa nsuku zonke. Ukuze alungise izinwele uzodinga iqoqo ubuncane:
ethule cwaka, hairpins;
evamile scrunchy Indwangu (mncane).
elilingene noma eqinile nenkanuko edlulele nail.
Sebenzisa mousse kuya uDries izinwele, bese ayesebenza iminwe emuva. Ukubeka band zenjoloba ibe Ponytail ongaphakeme bese qinisa kuze phezulu. Siyilungise imishudo. Nge oluqinisayo ezengeziwe Ukwakheka ongabonakali. Ehlangeni kumuntu imicu mncane kungenziwa kwesokunxele ukwakha isimo romantic, noma ukuhlanza izinwele, hhayi ukugxambukela. Zonke kancane silungise nge ukuvenisha. Everyday zezinwele for izinwele iDemo nge-elementi undulations noma curls wabeka nje ngoba usuvele unayo ukuthungwa ezikhexisayo, ungakwazi kuphela uzihlele ku ukwakhiwa.
High kwekhanda abayitoho for ezimfishane
Lapho ugunda ihlanganisa lamafisha front-line occipital imicu, kunzima kakhulu ukukwenza nge isisekelo iponi. Kodwa owathi lokhu yayenza ngokungacabangi? Kunalokho kukho elula nsuku zonke, kutjengiswe esithombeni, uzosusa izinwele evela esifundeni entanyeni ukubukeka kahle imvelo ibhizinisi. Ukuze alungise izinwele uzodinga:
Isiqophi, hairpins, engabonakali;
mousse futhi hairspray.
Hlukanisa izinwele zibe izingxenye ezintathu: i-front-line nge bang, bazisika umqhele futhi nape. Zonke izinwele ephansi kuyodingeka aqoqe futhi silungise. Ukuze wenze lokhu, uhlukanise indawo ibe yizingxenye ezintathu thwi, twist ngayinye ibe isixha futhi uvikelekile ku imikhawulo ongabonakali, njengoba esithombeni.
Manje thatha phakathi okuyingxenye futhi ngobumnene ngiyibeka phezu izinwele aphansi. Lungisa ongabonakali nezikhonkwane. Ngaphambili ehhovisi nge bang kahle engeza ukuba kwekhanda jikelele. Simple ngokwanele, futhi zonke izinwele isuswe phezulu. zezinwele short (ngezansi) ukubheka ngempumelelo imicu obudaywe ukuthi kwagcizelelani ukudweba kanye emakhiyubhi kwengoma.
kwekhanda Okuvamile "Malvinka" nezinwele ezimfishane amaminithi angu-10
Lapho kwesokunxele imizuzu 10 kwesikhathi mahhala futhi engabonakali kuphela, kodwa ngifuna ukubheka umxhwele futhi ezikhangayo, aid kuyofika, le kwekhanda elula ezingokoqobo. Ukuze wenze ivolumu ezidingekayo imicu kancane tousled ukuthungwa. Hhayi-ke, uma usuwenze emakhiyubhi nge curls, futhi manje-ke kuphela kudingeke ukuba kususwe phambi yomugqa ikhiye up. Ukuze alungise izinwele uzodinga:
mousse medium noma nenkanuko edlulele eqinile;
Okokuqala ukulungiselela ukuthungwa izinwele. Sebenzisa mousse, bese boma ivolumu beat ngezimpande. Dweba amathiphu imicu mncane. Manje thatha isondo amancane sivala umqhele futhi silungise ongabonakali yabo senhlekelele, njengoba esithombeni. Ukunganaki yilona gqamisa izinwele, ngakho asikho isidingo ukuyoguqulela zonke izinwele ukuze izinwele. zezinwele nsukuzonke nezinwele ezimfishane uhlobo "Malvinka" aphakathi kwamazwi ethandwa kakhulu futhi evamile njengoba abavumela ukukhipha izingidi ngaphambili yomugqa ebusweni futhi ngesikhathi esifanayo ukugcizelela isithombe isifazane.
kwekhanda Daily nge etshekile frontal
Kunzima eluka izinwele lemifisha scythe bendabuko, kodwa iningi haircuts square kukhona imicu eside ngempela phambi. Bafika ukuhlola ezinhle. Ngenxa yalesi kwekhanda kudingeka pre-ukulungiselela ukuthungwa voluminous futhi aminyene izinwele. Ngokuvamile, uzodinga:
nail izinwele mousse nenkanuko edlulele eqinile;
round shayela isitayela;
amakhono e kwenqwaba ukwaluka "ezisontekile" eluka (futhi ibizwa nangokuthi i-French).
Sebenzisa mousse izinwele futhi nge ibhulashi isiyingi ukuthola umthamo omuhle ezomile. Kancane afafaze phambi ingxenye kanye umqhele lacquer Strand babe obukhulu kakhulu futhi igcinwe kahle emakhiyubhi. Manje, kuye ngokuthi thina esikuthandayo, baqala sifake a eluka ngakuthathu ngakwesokunxele noma ngakwesokudla, njengoba izimbali kulo lonke line ebunzini. Uma ezinye imicu aqhame kusukela namathe - akunandaba - ngemuva kwakho konke lokhuya Yingakho sanikela izinwele ukuthungwa siqinile. Kudingeka zihlale esesimweni esihle. Letha eluka ukuze iphuzu ngemuva kwendlebe futhi silungise ongabonakali. Kancane yenza imicu phezulu, ukuze Uhluka ukwelukwa. zezinwele nsukuzonke nezinwele ezimfishane eluke amagoda futhi tangles izakhi - omunye isifazane kakhulu futhi ekhululekile. Bafanele ku arsenal of zonke fashionista.
Okuvamile kwekhanda bob nge nehaba "idabukile" ukuthungwa
Okwavelela lesi sitayela zibonakala ngokucacile kuyofikwa imicu Frontline izinwele. Ukucolisakala Torn ubukeka ngokugqamile futhi okungajwayelekile, amehlo. Yenza le kwekhanda ilula ngokwanele, futhi ilungele imodi abayitoho. Ngoba, uzodinga:
isisekelo - the Ragged wendlale Quads;
mousse futhi izinwele spray;
Izinwele kumelwe ahlanzeke, omile futhi zisebenza mousse ibhulashi round, edonsa zingu umuntu ngolunye uhlangothi. Manje wenze uboya ukukhanya izimpande ukwengeza ivolumu. Amaphini ukudonsa imicu edabukile ukuze amanga ngokuphelele flat ohlangothini, njengoba esithombeni. Fafaza laying ukuvenisha. zezinwele short (ngezansi), ngokusekelwe bob iziqu adinga ukusebenzisa njalo ayina likhanga, kodwa umphumela kuwufanele.
kwekhanda Okuvamile nge esiphongweni, izintambo wabeka
Uma esiphongweni kwekhanda kusikisela, futhi isikhathi isitayela kwezinkathazo zakhe zansuku zonke akunakwenzeka ukuqoba out njalo, zama kwekhanda elula ne front donsa. I ekukhokheni niyenzé ngomzuzu, futhi kubukeka ngempela umxhwele. Hairstyle efanelekayo ukusikeka ngaphandle esiphongweni ezinzima. Isitayela, uzodinga:
amaminithi ambalwa kwesikhathi khulula.
Lungiselela nokubeka-sisekelo, bese ahlukaniswe ukukhiya encane phambi kwesokunxele noma kwesokudla ukukhetha ovundlile yayo futhi ukusonta a tourniquet emabunzini. Ukuphela silungise ongabonakali. Uqedile! Lokhu kubuye ikhaya izinwele okukhulu. Izinwele ezimfishane akudingeki "break" uxhumano, kodwa umucu owodwa kuphela retracts ebusweni bakhe.
kwekhanda iDemo nge kwesiyingi gum
Lapho kukhona isifiso ukuze uzizamele imibono original, le kwekhanda ngeke ehlukahlukene arsenal yakho yezithombe. Kwesiyingi izinsini kuzolungisa sivala ngezihluthu usuku lonke futhi izonikeza Gap. Ukuze wenze zezinwele uzodinga:
setha gum yanoma yimuphi umbala;
kuze imizuzu engamashumi amathathu isikhathi.
Okokuqala, ukwehlukana izinwele bahlukana phakathi. Ukuhlukanisa Phakathi bands ezibanzi amasentimitha ezimbili emhlabeni azungezwe ebusweni ohlangothini ngalunye. Kill lonke izinwele emuva. Thatha imicu kusukela sokuvalelisa, ngiziqoqele ekhanda bands zenjoloba. Ngasinye kumele ixhunywe kulowo eyedlule, ukuze uthole umqhele esikhashana. Ncibilikisa lonke izinwele, basuke kahle ziqhathaniswa usebe. zezinwele Daily esisebenzayo yalolu hlobo ukuthi ukugcina isimo sokuqala usuku lonke futhi ayidingi ukulungiswa.
kwekhanda iDemo nge "lolwandle" sivala
isitayela zothando futhi mahhala nge curls abanganaki ethandwa kakhulu ngenxa kungenzeka ubufazi, obugagu kanye ukudala isimo samaholide ngosuku ejwayelekile. Curls izinwele iDemo ekhaya ukwenza nje ngokwanele. Ukuze alungise izinwele uzodinga:
izinwele yensimbi noma curling yensimbi, umshini wokomisa izinwele.
Okokuqala, faka i-mousse izinwele, emoyeni elomile. Amalokhi Intulo bebheke umuntu. Futha upende, bese nekama ngokusebenzisa ngeminwe yakho. Ngomusa unroll izinwele, ukuze basuke enwetshiwe. Kwaphinda ukuvenisha Ilokhi futhi izinwele ngomumo.
Zothando kwekhanda abayitoho nge-abarimi
Zezinwele nge ayindilinga noma usebe - esheshayo esiwusizo kakhulu nezinwele ezimfishane. Kudingeka kuphela pick up umhlobiso enhle Stylize ngayo izingubo. Ngaphansi ayindilinga, ungashintsha ukuthungwa izinwele - bushelelezi iqonde, mihlobiso, abacaphuni, voluminous futhi zokuphola ngesiswebhu. Ngalinye azobheka ezithakazelisayo futhi original. Ukuze alungise izinwele esitfombeni, uzodinga:
ukwenzela ukungena okuncane kakhulu nenhle black bezel;
round shayela isitayela.
Faka isicelo mousse izinwele, emoyeni elomile ibhulashi round. Yenza bouffant okusezingeni eliphezulu futhi voluminous phezu ukufakwa. Ahambisana Naleli izinwele bushelelezi, ukuze safana kwekhanda "igobolondo." Beka i-bezel abamnyama bese uvala wonke ukuvenisha.
zezinwele kwansuku zonke definition kufanele aqine nokupakisha, esiwusizo, isebenziseka ngezindlela eziningi futhi ngempela umbukwane, ngisho zokukhekheleza. Izinketho ngenhla zikuvumela ukuba sithathe imibono ucwaningo esizayo futhi bazifake izithombe ezintsha.